Musharax Xasan Cali Kheyre oo tacsi u diray Qooska uu ka geeriyooday Sheikh Nuur Baruud | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Musharax Xasan Cali Kheyre oo tacsi u diray Qooska uu ka geeriyooday...
Musharax Xasan Cali Kheyre oo tacsi u diray Qooska uu ka geeriyooday Sheikh Nuur Baruud
Waxaa la ii xaqiijiyay geerida Ilaahay ha u naxariistee Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo kamid ahaa tiirarka waaweyn ee Culimada Soomaaliyeed. Waxaan qoyskii uu Sheekhu ka baxay iyo guud ahaan bahweynta ku abtirsata isirka Soomaaliyeedba, uga tacsiyeynayaa geerida naxdinta leh ee Sheekha ku timid.
Sheekh Nuur Baaruud wuxuu kamid ahaa Culimada Soomaaliyeed ee Ilaahay ha sokow sababta u ahaa, naftooda iyo waqtigoodana u huray in bulshadeenu ay si sax ah u fahanto, uguna dhaqanto diinteena suuban ee Islaamka. Wuxuuna Sheekhu sidoo kale mar walba safka hore kaga jiray gudiyadda isku xilqaama ama loo xilsaaro howlaha gurmadka iyo gargaarka ah ee loo fidiyo shacabka soomaaliyeed, marka ay musiibooyinku dhacaan.
Waxaan Ilaahay ka baryayaa in Sheekha uu siiyo naxariistii Janno, Umadda Soomaaliyeedna ay badalkiisa helaan badal kheyr qaba oo booskii uu Sheekhu ka baxay buuxiya. Inaa Lilaah, wa inaa ileyhi raajicuun, naf walbaa waa tii geeri dhadhamiso.
Previous articleShirka Baydhabo oo Heshiis hordhac ah laga gaaray
Next articleWar ka soo baxay shirka Baydhabo
Haweenka muslimiinta ee ku jira milateriga Koonfur Afrika ayaa loo oggolaaday inay xirtaan xijaabka, iyagoona la xiran kara dareyska ciidmaada. Arrinkan oo ay horay u...
Tani waa mid kamid ah dhibaatooyiinka kajira Dalka ee Niger.
WAREEJINTA AWOODA AMNIGA DALKA SOMALIYA
Waraysiga askari ka tirsan Haramcad oo wal wal badan ku...
Ciidamada Madaxweynaha Jubaland oo goor dhawayd ka soo dagay Garoonka Muqdisho..
Qorsho halis ku ah Madaxweyne Farmaajo oo ka socda magaalada ...
Boqorka Sacuudi Carabiya oo magacaabay wasiirka cusub ee dhaqaalaha, halka...